Nika indawo yakho yeWordPress ezinye iiFlare | Martech Zone
Nika indawo yakho yeWordPress kwiFlare
NgoLwesithathu, Agasti 28, 2013 NgoLwesithathu, Agasti 28, 2013 Douglas Karr
Bendikhe ndakhangela ixesha elininzi kwiplagi eya kuthi ibonise ifuthe lilonke kunye nomntu ngamnye kumanqaku ethu kwimidiya yoluntu. Inani lamanani… Zingumqondiso wokuthembana, igunya kunye nokuthandwa. Ukuba unenqaku elinezabelo ezininzi, abantu banokulifunda eli nqaku-kwaye kunokwenzeka ukuba babelane ngalo.
faka Ukutshaya. Ukwabelana ngokwasentlalweni kubalulekile, kunye nokwenza isisombululo esihle kuko konke malunga neFlare. Zilungile kwiibhlog, iisayithi zeendaba kunye nabani na onomxholo ekufuneka kwabelwane ngawo, iFlare yiyo Ukwabelana nge-app sinqwenela ukuba sihlale sinayo.
I-flare ibhalwe kakuhle kakhulu Plugin WordPress ebonisa indawo ekwabelwana ngayo ngokwasentlalweni. I-flare izisa uyilo oluncinci kunye nolungabonakaliyo ekwabelaneni ngalo ngelixa lusebenzayo ekuqhubeni izabelo kunye nabalandeli. I-flare iyaphendula kumfundi kwaye ihamba nomsebenzisi njengoko behamba ngomxholo. I-flare inokuqwalaselwa ukuhlangabezana neenjongo zakho kunye nokukhethwa kwabaphulaphuli.
I-flare okwangoku ikwi-beta kwaye unako khuphela kwaye uyifake kwi-WordPress ngaphandle kweendleko. Abantu abaphuhlise iFlare benze umsebenzi obalaseleyo ekugcineni ibha yentlalontle ngokukhawuleza- kwaye babuyisele umva idatha egciniweyo njengedatha yemeta yeposi kufakelo lwakho lweWordPress. Sikwazile ukufumanisa izinto eziguquguqukayo kwaye sazidibanisa ngokuthe ngqo kwisalathiso nakudidi lwamaphepha-ukubonelela ngesalathiso esihle sokuthandwa kwenqaku.
Njengale posi, kushiyeke kuphela i-34 slots yokuthenga iFlare nge $ 79- leyo yi- $ 100 ishiye umrhumo wonyaka omnye weFlare nje ukuba iphumile kwi-beta kwaye ababhali bayayihlaziya ngezinto ezongezelelweyo!
tags: emailikhefuezifanaipiniPhinda ubhaleibha yokwabelanaisabelo sentlalontlekhubeka
I-OMA: UkuThengiswa koMxholo kunye neQonga lokuDala iTrafikhi
Agasti 29, 2013 kwi-6: 00 AM
Iposi enkulu uDoug! Enkosi ngokwabelana ngencam entle kakhulu…
Agasti 29, 2013 kwi-9: 31 AM
Uyabheja! Kwaye ndibone nje incopho yenkqubo yabo entsha eyi-agnostic…. izinto ezipholileyo!
Sep 14, 2013 kwi-11: 27 AM
Ewe! Ndifunde ngeqonga le-agnostic kwaye ndachukumiseka nyani ngeqonga ngokwalo linokuma ukuba ibali le-transmedia lixelelwa njani!